ဟော့ကင်းတို့၏ထူးခြားသောဝန်ခံချက် | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ဟော့ကင်းတို့သည် စကြဝဠာအကြောင်းသိရန် လွန်စွာကြိုးစားကြသည်။ သူတို့သည်
(– “things are as they are because they were as they were” –)
ဟူသောအဖြေကို လက်မခံနိုင်ကြချေ။ ကျေနပ်အားရမှုလည်း မရှိချေ။ အရာရာသည် အတိတ်က ဖြစ်သကဲ့သို့ပဲ ပစ္စုပ္ပန်လည်း ဖြစ်နေကြတာပဲပေါ့ဗျာ ဆိုတဲ့စကားကို သူတို့သည် ဘဝင်မကျချေ။ ဤသို့ ဘဝင်မကျသဖြင့် အိုင်းစတိုင်းကိုပင်လျှင် အားမလို အားမရ တစ်ခါက ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဟော့ကင်းသည် –
(Einstein should have known better.)
ဟူ၍ ကောက်ချက်ချဖူးသည်။ သူတို့၏ တွေ့ရှိချက်အရ စကြဝဠာကြီးသည် တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်နေသည်ကို ကောင်းစွာအထောက်အထား ပြနိုင်ခဲ့သည်။ စကြဝဠာ၏ ပြန့်ကားမှု တွေ့ရှိချက်မှာ (Edwin Hubble) သည် (1929) ခုနှစ်က သက်သေထူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အိုင်းစတိုင်းသည် (Edwin Hubble) ၏ တွေ့ရှိချက်ကြောင့် အံသြကာ သူ၏မူလအယူအဆ အချို့အား စွန့်လွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာမူ စကြဝဠာနှင့် ပတ်သက်၍ အိုင်းစတိုင်းသည် တရားသေဘက်ကို လဲသည်။ သို့မှသာ (God) နှင့် ကိုက်ညီမည်ဟူ၍လည်း အိုင်းစတိုင်း ဝင်စားခဲ့ပုံ ရသည်။ စကြဝဠာ စဖြစ်ချိန်သည် အချိန်၏ အစပင်ဖြစ်သည်ဟု ဟော့ကင်းတို့က ကြွေးကြော်နိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ပြီးပြီ။
စကြဝဠာသည် မဟာပေါက်ကွဲမှု (Big Bang) သီအိုရီအရ တစ်ချိန်က စတင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်ဟုသာ သိပ္ပံပညာရှင် အများအပြား ယူဆကြသည်။ ယခုအခါ ကြယ်စုတို့သည် အဝေးသို့ ဆက်လက်ပြေးသွား နေကြတုန်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စကြဝဠာသည် ကြက်မနှင့် ကြက်ဥ မည်သူက ဦးစွာဖြစ်သနည်းဟု မေးသောမေးခွန်းကို ဥကစ၍ ဖြစ်သည်ဟု သိပ္ပံပညာအရ ဖြေရှင်းကြသည်။ စကြဝဠာဆိုင်ရာဥ (Universe Egg) မှ (Big Bang) သီအိုရီအတိုင်း ပေါက်ကွဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။
ပေါက်ကွဲရခြင်းမှာ ထိုဥထဲ၌ သိပ်သည်းခြင်း လွန်စွာများပြား၍ အဆုံးစွန် တန်ဖိုးကို ရောက်သောအခါ ပေါက်ကွဲသွားသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဤကား ဟော့ကင်းတို့၏ အယူအဆပင် ဖြစ်သည်။ ဟော့ကင်းတို့သည် —
(Although science may solve the problem of how the universe began, it cannot answer the question: Why does the universe bother to exist? I don’t know answer to that.)
ဟု (The Origin of the Universe) စာစုတွင် ဟော့ကင်းသည် ဝန်ခံခဲ့သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဘယ်လိုစတင် ဖြစ်ခဲ့သည် ဆိုသည်ကို စကြဝဠာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ရှိသော်လည်း ဘာကြောင့် တည်ရှိလာခဲ့ရသည်ဟူသော မေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ မဖြေရှင်းနိုင်ကြချေ။ ဟော့ကင်း ကိုယ်တိုင်ကလည်း မသိပါဟု ဝန်ခံခဲ့သည်။ ယင်းဝန်ခံချက်ကို သူ၏ (The Origin of the Universe) စာစုတွင် ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
This entry was posted in Articles and tagged Myanmar Posts, အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.